October 2018 – Page2– AsiaApps
Google Play Store မှာ This item isn’t available in your country ကို အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး ဘယ်လိုကျော်မလဲ?
October 18, 2018 minn2unFeaturesNo Comment on Google Play Store မှာ This item isn’t available in your country ကို အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး ဘယ်လိုကျော်မလဲ?
Android User တွေအတွက် အဓိက Store တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Google Play ဟာ အလုံခြုံဆုံးနဲ့ စိတ်အချရဆုံးဖြစ်တဲ့ အပြင် User Information မပေါက်ကြားအောင်လည်း ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အတွက် E-Payment သုံးရလွယ်ကူတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ အသုံးပြုကြတဲ့…
Canva သုံးပြီး Poster လေးတွေလုပ်ကြမယ်
October 18, 2018 MikeyApp News / ReviewsNo Comment on Canva သုံးပြီး Poster လေးတွေလုပ်ကြမယ်
Canva ဆိုတာကတော့ poster တွေ၊ နဖူးစည်းစာတန်းတွေ၊ လက်ကမ်စာစောင်တွေနဲ့ ကတ်လှလှလေးတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ စိတ်ကြိုက်ပုံဖော်လို့ရမယ့် app လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ app လေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း graphic designer မဟုတ်တဲ့သူတွေ ကိုယ့်စိတ်ကူးလေးတွေကို ဒီဇိုင်းအနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်စေချင်တာမို့ လွယ်လွယ်ကူကူ…
မီးရောင်စုံနဲ့ ပျော်စရာသီတင်းကျွတ်အခါသမယမှာ မီးပန်းကြီးတွေနဲ့ ပုံလှလှလေးတွေ ဖန်တီးကြမယ်
October 17, 2018 October 17, 2018 MoonApp NewsNo Comment on မီးရောင်စုံနဲ့ ပျော်စရာသီတင်းကျွတ်အခါသမယမှာ မီးပန်းကြီးတွေနဲ့ ပုံလှလှလေးတွေ ဖန်တီးကြမယ်
Asiaapps ကမိတ်ဆွေတို့ရေ မကြာခင်သီတင်းကျွတ်တော့မယ်နော်။ မီးရောင်စုံတွေနဲ့ လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် အခါသမယ မှာ ပွဲတော်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ပုံလှလှလေးတွေ မဖန်တီးချင်ကြဘူးလား။ သီတင်းကျွတ် ပွဲတော်နဲ့ စိန်နဲ့ကျောက်လို ခွဲမရအောင် လိုက်ဖတ်တဲ့ မီးပန်းလေးတွေကိုရော ချစ်ကြလား။ ဘယ်လောက်ပဲ…
iPhond XS နဲ့ Pixel3ရဲ့ ကင်မရာ ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းသလဲ???
October 17, 2018 October 17, 2018 MoonApp News / Smartphone NewsNo Comment on iPhond XS နဲ့ Pixel3ရဲ့ ကင်မရာ ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းသလဲ???
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Asiaapps က မိတ်ဆွေတို့အတွက် အထူးဆန်းလေးဖြစ်သွားအောင် iPhone XS နဲ့ Pixel3တို့ရဲ့ ကင်မရာ နှိုင်းယှဉ်ချက်လေးကို ဖော်ပြပေး သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းနှစ်ခုစလုံးမှာ စုစုပေါင်း ကင်မရာ ၃လုံးပါဝင်တာ ချင်းတော့ အတူတူပါပဲ။ဒါပေမယ့်…